Okokuqala lapho evakashele eJalimane, izakhamuzi ancike travel ejensi. Abantu ababeka njalo wavakashelwa kuleli lizwe izindlela yokubhuka ekuqaleni kwamathikithi emoyeni. Nokho, kulabo abasebenza ubunjalo State wavakashela, isifundo zomhlaba kanye nokuthuthukiswa umbala wendawo, ayikho indlela engcono ukwedlula eqashelwe Travemünde - Helsinki.
Kuyinto elula ukuba uthole eJalimane besuka Finland ngesikebhe. Izimoto ngaphandle kwezinkinga umngcele emadilini kanye nani. Ukuze uthole lolo hambo kudingeka alungiselele kahle. Okokuqala, udinga:
Ukuze uthole kanjani futhi kuphi ukuthenga amathikithi for isikebhe nemoto amaphakheji, uma ukuthutha umshini.
Cwenga lwezikhathi yakho.
Ukuze sithole yenethiwekhi.
Kususelwa impendulo yomsebenzisi.
Ukunamathela lezi zincomo elula, uyokwazi ukuhamba kwezomnotho, bejabulela induduzo umbono omuhle phezu khona oLwandle iBaltic.
Izinzuzo nezingozi isikebhe
Ukulandela esuka eFinland aye e-Germany futhi emuva isikebhe, uthola eziningi izinzuzo, okuyilezi:
Ithuba njengokungathi sijabulela indawo enhle ka oLwandle iBaltic kungakapheli amahora 28.
Naye esingazithatha ezifuywayo, kuhambisana nazo zonke izilinganiso ezempilo nokuphepha.
Empeleni umngcele nge imoto, pre-ugcwalisa iphakethe ekhethekile kuye nokususa amathayi igcwele, okuyinto zivinjelwe eJalimane.
Kukhona iqoqo khulula amasevisi, okuhlanganisa Ukuvakashela sauna bangempela Finnish.
Wokuvikela ihlelwe ezingeni eliphezulu kakhulu.
Ububi kuphela ukuhamba ngesikebhe kuyinto ubude bayo uma iqhathaniswa nezinye izindlela zezokuthutha.
Izikebhe Travemunde - Helsinki kuyindlela engcono ukuze bawele umngcele, uma kukhetha wayeka kulolu hlobo ezokuthutha. Kwaphela iminyaka eminingana kule ndawo ayinakho mncintiswano, inkampani Finnlines. Nsuku zonke ngaphandle ngeSonto, sasemanzini ivela Helsinki ukuba Travemünde kusukela 17.00 kuya 21,30 ngosuku olulandelayo, kanye emuva - kusuka 3.00 kuya 9.00 ngosuku olulodwa abanye. Labo abakhetha indiza ngoMgqibelo, ngeSonto elilandelayo, nikwazi ukuthwala ebhodini sasemanzini ukhululekile. Kufanele kuqashelwe ukuthi Helsinki - Travemünde - umusi, intengo zazo kuncike yobudala inkomba:
Abadala - 24-28 euro.
Izingane 13 kuya eminyakeni engu-17 - 18-20.
iminyaka 6-12 - kusukela euro 12 kuya 14.
Izinsuku ezingaba ngu-, kuye ngokuthi izimo sezulu kanye nezinye izinto, Finnlines izikebhe ayikwazi ukusebenza. Ngezikhathi ezinjalo zenziwa zomphakathi kuwebhusayithi esemthethweni inkampani.
Indlela abale izindleko?
Bathathe uhambo kuhamba phambili, engakafiki Petersburg, futhi ukusuka lapho - eHelsinki. Kufanele acabangele izindleko uphethiloli noma ibhasi uma uhambo senziwa ngemoto yakho. Izindleko ibalwa kanje:
Intengo ithikithi Siqu siphindwe ngesibalo sabantu.
Ukuze yengezwe izindleko gumbi.
Qondisa ibhekwa ngoba imoto.
Plus izindleko izilwane kanye ukuhanjiswa kokudla.
Inani lentengo futhi kuncike izinsuku zokuhamba kwakho, uhlobo gumbi kanye Autopack. Ehlobo amathikithi isikebhe izobiza kakhulu ngaphezulu. Intengo Indlela kanje:
amathikithi ngamunye - kusuka 22 kuze kube 170 euro, kuye ngokuthi engu-umgibeli kanye gumbi hlobo. Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-6 ephelezelwa omdala athunyelwa mahhala.
kumakhabheni abiza - kusuka 240 kuya 1580 euro.
Car amaphakheji - kusuka 375 kuya 1200 EUR.
Uma ukubhuka amathikithi zisuka zombili izinkomba, ukuze uthole ngempela isaphulelo abantu abangamaphesenti angu-20.
ezokuthutha Private kungenziwa athuthwe ngezindlela ezimbili: ngokusebenzisa lokukhokha siqu noma Autopack. Inketho yokuqala ukuthenga amathikithi ngazinye, endlwaneni eyakhiwe ehlukile (uma kudingeka), isikhala siqu ukuze umshini kuye ngokuthi lingakanani. Intengo motor iphakethe kuhlanganisa izindleko endlwaneni eyakhiwe ehlukile abagibeli abane futhi intengo yezokuthutha. Autopack elibanzi ngcono, uma owela Kwenziwa zokuthutha siqu.
gumbi ngamunye angazamukela imibhede 2-4, yokugezela, eshaweni, air conditioning, i-TV, ikhabethe, iKhabhinethi. Intengo incike ubukhulu, khona kwamafasitela Izinsiza ezengeziwe. Ungakwazi ukuletha kanye ambalwa ezifuywayo, ekhokhela isevisi lube ngu-100-euro. Kulokhu, gumbi yokubhuka uyisidingo.
Kafushane mayelana Helsinki
Izikebhe Travemunde - Helsinki, ezazidume ngokutshala induduzo yayo futhi waba nokwethenjelwa. Ukuhamba phakathi la maphuzu, kubalulekile ukwazi ezikhangayo esemqoka. Inhloko-dolobha ye Finland itholakala ku-Gulf Finland ku amakhilomitha angamakhulu amathathu kusukela Petersburg ezine Stockholm. Helsinki - yezombangazwe, isikhungo ngobukhulu kwezomnotho, ezamasiko kanye commercial. kungenziwa behlukene ezikhangayo esemqoka edolobheni zihlanganisa:
I National Museum, okuyinto has iqoqo olukhulu zomlando kusukela ezikhathini zasendulo kuze kube isikhathi yesimanje.
igalari Finnish, Museum komuzi.
Port of Helsinki ngobukhulu kanye inzuzo kwezimpahla sesibili phakathi kwamazwe zaseScandinavia. Anakho emathekwini ezintathu, eziyisithupha umgibeli ezikhumulweni. Finnlines izikebhe ukusebenzisa njalo Travemünde, eTallinn Stockholm.
Lokhu Emaphethelweni edolobheni German olunothile eLübeck kuyinto enkulu isikebhe port, okuyinto etholakala eduze esiteshini ibhasi sesitimela. Travemünde (eJalimane), ezazidume ngokutshala izakhiwo zalo eziningi gothic, kanye marzipan okumnandi. Ingxenye yedolobha lizungezwe umfula Trave futhi khona oLwandle iBaltic. amabhange zabo ziyisiliva olunesihlabathi futhi izungeze lo muzi ka eLübeck, sebuningini kwezindawo zasemadolobheni. Zomlando kanye nenani izivakashi kukhona izindawo ezilandelayo:
Hall, wadala ngekhulu le-13.
Cathedral Luebeck (engu-12).
esibhedlela yaseJalimane endala Geis Heiligen, elakhiwa ngo-1227.
On ezindaweni ungakwazi ukungcebeleka bejabulela ilungiselelo edolobheni, futhi emabhishi kuyoletha injabulo nesokuphumula ngu olwandle noma emifuleni.
Báqondiswa lobuya abasebenzisi, singabona a izici ezimbalwa ukuthi izikebhe Travemünde - Helsinki. Okokuqala, ukukhetha elijabulisayo kumakhabheni hlobo. Lapha ungakhetha ikamelo ejwayelekile elingenamafasitela nazo zonke Izinsiza endlwaneni eyakhiwe umndeni noma suite zikanokusho futhi ivulekile.
Okwesibili, ukweqa ngesikebhe, uyojabulela ukubukwa omangalisayo kolwandle, ungavakashela i-sauna mahhala, noma umane nje ubukele i-TV, elitholakala kuwo wonke ikamelo, kanye nezinye izinto ezenzelwe. Enye inzuzo ukuthi kungenzeka ezokuthutha izithuthuthu kanye izimoto, ezifuywayo. Abanye abasebenzisi lokususa kuphela ngenani kuqhathaniswa eliphezulu travel kanye nohambo isikhathi ngamancozuncozu, okuyinto amahora ngu-28.
Ngemva enifeza ukubuyekeza eningiliziwe owela phezu isikebhe Helsinki-Travemünde siphetho ukuthi lolu hambo ngeke ivumelane bonke abathandi bemvelo enhle, ulwandle nenduduzo. Izindleko zokuhamba kakhulu ngaphansana ebhanoyini. Kungenzeka ukuhamba ezifuywayo nemoto. Futhi umcabango ezijabulisayo kuyi Inqubomgomo intengo, ikhono ukhethe uhlobo apholile futhi inkonzo.
Izimonyo "Dermahil": ukubuyekezwa. Amalungiselelo mesotherapy kusukela Dermaheal Caregen Co. (South Korea)